Iimpazamo eziqhelekileyo kunye neendlela zokusombulula iingxaki zezivalo zebhola!
Iimpazamo eziqhelekileyo zezivalo zebhola kunye neendlela zokujongana nokusombulula iingxaki Iibhola zeebhola zinokuba nokuvuza kwangaphakathi ngexesha lokusetyenziswa okanye lofakelo. Ngenxa yokutshintsha rhoqo ngexesha lokusetyenziswa, okanye ukusilela ukufaka njengoko kufuneka, ivalve yebhola ayinakusebenza ngesiqhelo. Izizathu zokuvuza kwangaphakathi kwevalve yebhola eziphambili ...
Izinto eziluncedo zetywina elinzima lesakhiwo soxinzelelo lwebhola
Isivingco esinoxinano oluphezulu soxinzelelo lwebhola sineendawo ezimbini zokutywina. Okwangoku, izinto zokutywina zomhlaba zevalvu zebhola zisetyenziswa kakhulu kwiiplastiki ezahlukeneyo. Zineempawu ezifanelekileyo zokutywina kwaye zinokutywinwa ngokupheleleyo. Zikwasetyenziswa ngokubanzi kwiinkqubo zokucoca. Ukusebenza okulula, ukuvula ngokukhawuleza ...
Umgaqo osebenzayo kunye nokuthintelwa kweentsimbi zebhola ezingenasici
Umgaqo wokusebenza wevalufa yentsimbi engenasici kukwenza ivalve ingavuleki okanye ibhlokiwe ngokujikeleza isiseko sevalve. Umzimba wevalufa yebhola unokudityaniswa okanye ukudityaniswa. Le ilandelayo ivalve encinci iya kukwazisa kulwazi olufanelekileyo lweentsimbi zebhola ezingenazintsimbi. Intshayelelo emfutshane ...